अभय श्रेष्ठ - | Nagarik News - Nepal Republic Media
अभय श्रेष्ठका लेखहरु :
पाँचवर्षे सुदिनले सपनामा दिदीलाई देख्यो। दिदी सुम्निमाले दुवै हात माथितिर उचालिन्। चारैतिर डाँडाले थामेको आकाशलाई सजिलै छोइन् र धक्का दिइन्। आकाश त कता हो कता माथि पो धकेलियो। अनि दिदी आफैँ पनि बिस्तारै आकाशतिर उड्न थालिन्।
अभय श्रेष्ठ १३ श्रावण २०७६ सोमबार १४ मिनेट पाठ
‘आन्दोलनकारी स्वयंले यसको कन्चटमा चक्कु घोपे’, इन्सपेक्टर सुजन सिलवालले चिया सुरुप्प पार्दै भन्यो, ‘यसकारण यसको होस ठेगानमा छैन।’
अभय श्रेष्ठ २६ वैशाख २०७६ बिहीबार १५ मिनेट पाठ
बाँचीवर्ती रहे, मेरो प्रसिद्धि सुनेर एक दिन खोज्दैखोज्दै ऊ मलाई भेट्न अवश्य आउँछे । अनि उसलाई पनि गर्व हुनेछ कि कुनै दिन म उसको आत्मीय ‘साथी’ वा त्यसभन्दा अझ बढी केही थिएँ । अथवा मेरो हृदयविदारक प्रेमकथा पढेर पश्चातापले खरीको गिन्डोझैँ चिरिँदै प्रायश्चित गर्न आउनेछे । त्यसपछि सबै बिर्सेर हामी कतै कुन्युँको छेको लाग्नेछौँ र फेरि एकपटक निस्फिक्री वाख्यागीत गाउनेछौँ ।
अभय श्रेष्ठ १ भाद्र २०७५ शुक्रबार १८ मिनेट पाठ
खप्तडमा यसपालि गंगा दशहरा मेलाको अघिल्लो दिन उधुमै मन हर्ने घोडादौड प्रतियोगिता भइरहेको थियो । मेलास्थल त्रिवेणीधामबाट उत्तरतिर अलि उकालो चढेर ४५ मिनेट हिँड्दा दिवंगत खप्तड बाबाको आश्रम पुगिँदोरहेछ।
अभय श्रेष्ठ ५ श्रावण २०७५ शनिबार २८ मिनेट पाठ
जेबी दलितको प्रेमकथा
मीन पचासको बिदामा एक दिन जुठबहादुर र गीता खतिवडा फिल्म हेर्न नवदुर्गा हल पुगे । अव्यक्त नै सही, छिपछिपे प्रेममा तिनीहरू भिजेकै थिए ।
अभय श्रेष्ठ २८ चैत्र २०७३ सोमबार १८ मिनेट पाठ
जीवनको अन्तिम घडीमा सार्वजनिक परिचय नभएका सर्वसाधारणझैँ उनी गुमनाम भएर बिदा भए। तर, तिनले बु‰नु जरुरी छ, जसरी नेपालीमा विजय मल्ल, गोविन्द गोठाले, रमेश विकलको स्थान छ, नेपालभाषामा रामशेखरको सम्मान त्यही स्तरको छ। जसरी नेपाली नाट्य क्षेत्रमा प्रचण्ड मल्ल, हरिहर शर्माको स्थान छ, नेपालभाषाको नाटकमा रामशेखरको स्थान त्यतिकै छ।
अभय श्रेष्ठ ५ चैत्र २०७३ शनिबार २२ मिनेट पाठ
डोनाल्ड ट्रम्पको नारीद्वेष
चुनावताका २५ दिनमा उनले १ सय १२ झुट बोलेका थिए। रियालिटी टिबी सोका सञ्चालक र रियल स्टेटका व्यवसायी ट्रम्पले देश पनि आफ्नो कम्पनी जसरी नै चलाइदिने घोषणा गरिसकेका छन्। यी सब हेर्दा लाग्छ, उनको जित गल्ती, गन्जागोल र विसंगतिहरूको प्रहसन थियो।
अभय श्रेष्ठ १४ माघ २०७३ शुक्रबार १३ मिनेट पाठ
अबु मियाको चौकीदारी
ओम पुरीले ती सर्वसाधारण, गरिब र अभागी जनको संघर्षलाई जीवन्तता दिएका थिए जसका लागि विद्रोह र लडाइँ निर्विकल्प उपाय हुन्थ्यो।
अभय श्रेष्ठ २९ पुस २०७३ शुक्रबार ११ मिनेट पाठ
'भोको घर' को आत्मा
काठमाडौँ मलस्थित थियटरमा प्रतिभाशाली निर्देशक केदार श्रेष्ठले एउटा स्वादिलो नाटक पस्केका छन्, भोको घर। गोविन्द गोठाले लिखित यो एकांकी आधुनिक नगर जीवनको अवसादबाट सुरु भएर वेदनाको चुलीमा पुगेर सकिन्छ।
अभय श्रेष्ठ १५ पुस २०७३ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
लक्ष्मी परियारको नियति!
अब यो वा त्यो निहुँमा लामालाई उन्मुक्ति दिए वा लगभग उनकै मतियार प्रहरी इन्चार्जलाई कारबाही नगरिए कथित बोक्सी प्रथाले फेरि सामाजिक स्वीकृति पाउँछ। अनि हाम्रो समाज फेरि मध्ययुगमा फर्कन बाध्य हुन्छ।
अभय श्रेष्ठ १ पुस २०७३ शुक्रबार १३ मिनेट पाठ
फिडेल क्यास्ट्रोको बिरासत
अघिल्लो हप्ता समाजवादका स्वप्नद्रष्टाबीच अत्यन्त सम्मानित संसारका एक महान् राजनेताको निधन भयो। उनी थिए क्युबाली क्रान्तिका प्रणेता तथा पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो। संसारकै जीवित राजनेतामध्ये उनको कद, सम्मान र जनप्रियता सम्भवतः सबैभन्दा उँचो थियो।
अभय श्रेष्ठ १७ मंसिर २०७३ शुक्रबार १३ मिनेट पाठ
क्रान्तिपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङ एक दिन विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञान जाँच्न कुनै गाउँको विद्यालय गए । एउटा टोकरीमा स्याउ राखेर उनले सबै विद्यार्थीलाई एकएक वटा लिन आग्रह गरे । भोकाएका विद्यार्थीले हाप र झाप गर्दै सकेसम्म सबैभन्दा ठूलो र राम्रो स्याउ छानेर खाए । एउटा हट्टाकट्टा छात्रले भने सबैले छानेर बाँकी रहेको कमसल स्याउ लियो ।
अभय श्रेष्ठ ४ मंसिर २०७३ शनिबार १९ मिनेट पाठ
तसलिमा, युवा र विचार
दसैँ, तिहार सकिएको छ । हिन्दु चाड भनेर विरोध गर्नेहरू पनि यी अवसरमा उल्लासमय मुडमा देखिन्छन्। राज्यले दिने लामो बिदा र अतिरिक्त तलब प्राप्तिका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रा अधिकांश युवाको दसैँ, तिहार भने सिर्जनशील काममा भन्दा मदिरा, मैमत्ता, तुजुक र मारपिटमा बित्ने गरेका छन् । बिना अर्थ र बिना कारण कतिले ज्यानै गुमाएका घटना खबर बनेर आउँछन् त कतिपय प्रसंग खबर बन्नै पाउँदैनन् ।
अभय श्रेष्ठ १९ कार्तिक २०७३ शुक्रबार ११ मिनेट पाठ
भार्वाच्वमा साहित्य तः मुंज्या
वैचारिक, परिवर्तनकारी र सन्देशमूलक साहित्य–कला पक्षधरका नाताले तः मुंज्याले सबैखालका, खासगरी कलावादी लेखक–कलाकारलाई समेट्न नसक्नु स्वाभाविक हो। तर, तिनै जनपक्षीय लेखक–कलाकारबीच पनि विविधता खोज्न सकिन्छ। यसको स्वरूपलाई पनि अन्तर्क्रियामुखी बनाउनु जरुरी छ। जस्तोः छानिएका कविका केही कविता, कथाकारका केही कथा र तिनैमाथि बहस गराउन सकिन्छ।
अभय श्रेष्ठ ६ कार्तिक २०७३ शनिबार १८ मिनेट पाठ
गान्धीवादका रेफ्री देउवा!
हाम्रो राजनीतिमा त्याग, इमान र निष्ठाको खडेरी छ। यही खडेरीका सूत्रधार शेरबहादुर देउवाहरू गान्धीवादका रेफ्री बन्छन्। योभन्दा ठूलो अन्तरविरोध केही होला!
अभय श्रेष्ठ १ कार्तिक २०७३ सोमबार १३ मिनेट पाठ
अभय श्रेष्ठका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्